Safaaradda Soomaaliya ee Kenya oo dhismooyin lagu kordhinayo | Dayniile.com
Home Warkii Safaaradda Soomaaliya ee Kenya oo dhismooyin lagu kordhinayo
Mas’uulyiinta Safaaradda Soomaaliya ee Kenya iyo Jaaliyadda Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi oo shaly shir ku yeeshay xarunta dhismaha safaaradda ee magaalada Nairobi ayaa ka wada hadlay sidii ay isaga kaashan lahaayeen dhismayaal cusub oo loogu soo kordhiyo xarunta dhismaha safaaradda.
Dhismayaashaan lagu soo kordhinayo Safaaradda ayaa Waxaa kamid ah Misaajid lagu cibaadeesto iyo guriga safiirka safaaradda oo laga dhisayo gudaha safaaradda, waxaana fikirkaas jaariyadda u soo jeediyay safiirka safaaradda Soomaaliya ee dalka Kenya Ambassador Maxamuud Axmed Nuur Tarsan waxa uuna kawaramay dhibaatada ay leedahay in Safiirku uu daganaado Hotel.
“Safiirkgu in uu deganaado hotel ee marba alaabtiisa meel loo raro markii calaaqaadka lakala gooslay waxaan alaabtii keedka Ku heenay Kuntendhar Kira ah 3bilood ayaanu Ku heenay hada waxaan deganahay Hotel wax walba ayaana lagu qarinkaraa ,waxaana la rabaa in ay dhoorsantahay alaabta iyo wax walba oo safaaradu dadka ugu adeegeeso”. ayuu yiri safiirka Soomaaliya ee u fanidha Dalka Kenya.
Dhamaan ganacsatadii Ka soo qeebgashay ayaa balan qaaday in ay dhisidoonaan dhismayaashaan.
Previous articleWaasiirad Khadiija “ aniga hooyadeey iyo aabahey waxay kasoo jeedaan Hiiraan iyo Shabeellada Dhexe, abtiyaashey ayaan dacwad ka ahay
Next articleAlec Baldwin oo ka hadlay meel fagaare ah tan iyo markii uu si lama filaan ah u toogtay filim-qaade Halyna Hutchins
Maxkamadda Caalamiga ah ee Cadaaladda ee ICJ ayaa maanta oo ku beegan 12-ka October 2021 waxa ay dhinac u rideysaa dacwadda Badda ee Soomaaliya...
Booliska Suudaan oo kala eryay dad dibadbaxyo ka dhigayay Khartuum